Dhoofinta Xoolaha oo Sanado kadib ka bilaabanaya Soomaaliya
Dhoofinta Xoolaha oo Sanado kadib ka bilaabanaya Muqdisho
Ra’iisulwasaaraha doowlada Federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa waxa uu sheegay in bishan January ee Sanadka Cusub ay bilaabi doonaan dhoofinta Xoolaha nool oo laga dhoofin doono dekeda magaalada Muqdisho.
Ra’iisulwasaaraha ayaa tilmaamay ineey ku raja weenyihiin in bishiiba ay kasoo xarooto lacag gaareeyso 5milyan, dhaqaalaha dalkuna uu isbadali doono, dadbadan oo Soomaaliyeedna ay shaqooyin ka heli doonaan.
“Goordhow waxaa xamar ka bilaabanaya dhoofinta Xoolaha nool, waqti deg deg ah ilaa January, waxaana ku qiysanay in bishiiba ilaa 5milyan oo dollar lacag gaareysa ay kasoo xarooto” ayuu yiri RW Saacid.
Xoolaha nool ee Soomaaliya ayaa waxaa laga dhoofin jiray dekadaha Boosaaso iyo Ber-bera, oo maamulada kajira halkaas iyaga oo shirkado shisheeye kaashanaya ay Xoolaha dhiifin jireen, balse dhaqaalaha kasoo xarooda ayaa lasheegayaa inuusan ahayn mid dhamaysturan oo gacmo badan uu soo mari jiray.
Waa markii ugu horeesay ee doowlada Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in dhoofinta Xoolaha nool ay ka bilaabeeyso dekeda Magaalada Muqdisho, tan iyo bur-burkii.